Icebo Elikahle Lokukhulisa Ibhulogi Yakho | Martech Zone
NgeSonto, ngoJuni 29, i-2008 NgoLwesibili, Okthoba 4, 2011 Douglas Karr
Noma ngabe ibhulogi yakho yangasese noma eyakho yenkampani, le yi iqhinga elihle lokukhulisa izithameli zakho eziku-inthanethi.
Tags: HlolaUkusebenziseka kwesiteshi esiphambanwenithuthukisa imiphumelaisiteshi sokumakethaKubhala
Jun 29, 2008 ku-3: 14 PM
Okuthunyelwe okumangalisayo uDoug!
Jun 29, 2008 ku-6: 06 PM
Kwesinye isikhathi ngicabanga ukuthi isizathu uJanis engasenaso kungenxa yokuthi umhlaba awukwazanga ukuphatha iSoufulness engako emzimbeni wowesifazane oyedwa.
UJun 30, 2008 ngo-8: 16 AM
Sawubona, lelo igigi lami! Ukukhetha okuhle, noma kunjalo. Qagela kuzodingeka ngigxile kuzungeze isiqeshana esihle sikaJanis.
Jul 2, 2008 ku-9: 04 AM
Kepha angikwazi ukucula, ingasaphathwa eyokucula njengoJanis. Qagela kufanele ngithole enye into.